Buy Condo Rent in Mayangone (ID-669) (13Lks) in Mayangone on ipivi.com
Condo Rent in Mayangone (ID-669)
Active on site: 78 days
Views: 64 (+1)
Near Kabaraye Pagoda Road, 1250 sqft condo for rent in Mayangone Township. Condo has Living-room, One Master Bed-room, Two Single Bed-rooms, Dinning, Kitchen and Bath-rooms . Condo with four air-conditioners.
Monthly Rent Price - 1000 USD (Nego)
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းအနီးရှိ ငှားရန်ကွန်ဒို ဖြစ်ပါသည်။ ကွန်ဒိုအိမ်ခန်းအကျယ် - ၁၂၅၀စတုရန်းပေရှိပြီး ဧည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်းကျယ် တစ်ခန်း၊ အိပ်ခန်းငယ် နှစ်ခန်း၊ ထမင်းစားခန်း၊ မီးဖိုချောင်နှင့် ရေချိုးခန်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ လေအေးပေးစက် လေးလုံး တပ်ဆင်ပါရှိသည်။
ကွန်ဒိုအိမ်ခန်း၏ လစဉ်ငှားရမ်းခ - ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ (ညှိနှိုင်း)
မရမ်းကုန်းရှိ ငှားရန် ကွန်ဒို (ID-669)
Name: Condo Rent in Mayangone (ID-669)
Yangon Region , Mayangone
Active on site 78 days